Tsy fanaovana fanambaram-pananana : hanenjika ny Bianco rehefa tapitra ny telo volana | NewsMada
Tsy fanaovana fanambaram-pananana : hanenjika ny Bianco rehefa tapitra ny telo volana
“Mandefa taratasy fotsiny ny Bianco amin’izay tsy manao fanambaram-pananana, ary manome telo na roa volana hanaovana izany. Raha tsy mahavita ao anatin’izay fe-potoana izay ilay olona, atao ny fanenjehana.” Io ny nambaran’ny tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean-Louis, teny Ankorondrano, omaly, momba ny fanarahana ny fanaovana fanambaram-pananana amin’ny ady amin’ny kolikoly.
Azon’ny Bianco atao, manomboka izao, ny manamarina ny fanambaram-pananana izay apetraka ao aminy: na milaza ny zava-misy marina, na misy afenina. Manafaingana kokoa ny fomba fanenjehana izay. Taloha, raha misy tsy manao fanambaram-pananana, mbola maka vadintany ny Bianco. Ny vandintany no mampitandrina, vao afa-manenjika ny Bianco. Amin’izao, tsy ilaina intsony izany.
Nohamafisiny fa mbola manome fe-potoana ny Bianco amin’izao. Rehefa tapitra ny fe-potoana telo volana: manomboka ny fanenjehana, satria efa nanao fampilazana faobe ny Bianco.
Manao fanaraha-maso ny fampiasam-bola ny Bianco
Misy paikadim-pirenena iadiana amin’ny kolikoly, izay efa namaritra hoe tokony hametrahana fomba fiasa mahomby amin’ny fampiasana ireo fanampiana rehetra azo amin’ireo mpamatsy vola isan-tokony, araka ny fanazavany. Misy àry ny fanaraha-maso ny fampiasam-bola eny anivon’ny sampandraharaham-panjakana, kaominina…
Amin’izay fanatanterahana ny voalazan’ny tanjona amin’ny paikadim-pirenena izay amin’ny fahaizana mifehy sy ny fampiasana ny vola: nandray manampahaizana manokana momba ny ady amin’ny kolikoly ny Bianco, miara-miasa sy mifampizara traikefa aminy, nanomboka ny volana janoary teo: Florian Schatz, izay efa niasa tany Afrika, Amerika Latinina…
Mba hahitam-bokatra kokoa amin’izay ny ady amin’ny kolikoly, indrindra amin’ny “trondro vaventy“?